May 1, 2013 at 11:42 at the
taasi waa cadaalad darro. Waxaad u ahaa sabab sababta aan u imid wordpress. Run ahaantii niyad in Moderators wordpress waxaan ahay. Waxaad u qalmaa mid ka badan oo kaliya link yar.
Well, Waxaan rajaynayaa in aad awood u leedahay in ay sii socda.
Waxaa laga yaabaa in aad bilaabi kartaa olole u sheegto WordPress ma waxaan oo dhan waa sidaa ku faraxsan. Waxaan bilaabay in aan la isticmaalayo WP inta badan sababta oo ah plugin.. waxa ay faa'ido weyn ee SEO & links on Google. Waxaan ahaa webmaster ah 17 sano iyo in ka heli ii joojiso isticmaalka Dreamweaver & baddashaan WP.. waxay ahayd sababta oo ah Transposh. 🙂
Thanks for erayada nooca, aad this qaadi karto si aad forums wordpress ah, oo ha Moderators ka ogaadaan, laakiin ma rumaysan tahay inay tani kaa caawin doonaa inta.
Waxaan u maleynayaa in xalka aan wordpress la kor u dhakhso badan hadda socda doonaa.
Wow in uu si murugo leh, halkaas oo aan ka caban kartaa??
Waxaad u caban kartaa on forums wordpress ah, laakiin anigu u malayn maayo cid dhegaysan doonaan.
Waa hagaag tani waa war xun. Anigu ma aan kula tahay kooxda WordPress ah loola dhaqmo horumarinta plugin sida tan. Waxay u baahan yihiin si ay dib falalka ay. Like aad ayaa sheegay in, link waxaa laga saari karaa oo in hadda in la sameeyaa kara wakhti dheer ah. Waa maxay dhibaatada? Dhibcood Your yihiin in ka badan ansax ah oo aan la isticmaalay plugin on badan oo goobaha aan, taas oo ii keenay badan oo gaadiidka dheeraad ah iyo sidoo kale kor u kacay raad goobood ee Google. Dib baan aad ee this.
Themer Child sheegay
Well in uu yahay oo keliya naxdin leh. Ma heli waxa heshiiska u weyn yahay. Waan ku faraxsanahay inaad weli siinaya ka siib in sida aan u isticmaali on a website-yada dhowr.
Francois Lachance sheegay
May 3, 2013 at 3:16 at the
WordPress waa mid laga cabsado,Waxa kaliya ee ka dhigi wordpress wanaagsan yahay bulshada ee horumariye sida nin ee aad,kii aad u badan oo dadaal loogu talagalay lacag lahayn iyo nin recognition.You aad u yar ku sameeyeen shaqo heer sare ah oo leh plugin this iyo rajaynaynaa in sidaas la sameeyo xitaa ka dib markii that.Best nasiib kuu sii socon doona
Raacsaneyn Francois. WordPress waa mid laga cabsado oo aan ku dhiirigelinayaan in aad sida.
Waxaan u maleynayaa in xeerkan wordpress waxaa loogu talagalay si looga hortago pingvin penality google iyo this site ka soo rigoore badbaadin.
Fikrad xiiso, laakiin waxaan wax ku nahay ilaa xad ka qaban karaa google oo aan wordpress.org patronization, iyo sidoo kale – waxaa loo ogol yahay inuu qabto link a on widgets aad, weydiin facebook, twitter, ShareThis(page dhakhsaha badan si rank 10), iyo kuwo kale oo badan
Ana Kelly sheegay
Waxaan ahay uga xumahay inaan maqlo ayaan la isticmaalayo aad plugin for sano aan iyo waan jeclahay….
Waxaan rajaynayaa in aad ilaaliso dayactirka.
Waxaan jeclaan lahaa inaan idin sheego in aan si buuxda u taageeraan go'aanka 🙂
Hay ruxid nacasiin ah 😉
May 8, 2013 at 2:43 at the
Wixii rikoorka, aad si fiican loo ogol yahay in ay xidhiidh ee widget. Xeerarka on WordPress.org kaliya sheegayaan in link waa in la Link ka gaabsadeen-ee ah, ma mid lagaga bixi ah.
Adigaa mudan in aad plugin ku WordPress.org marka aad go'aansato in aad rabto in uu u hoggaansamo xeerka in si gaar ah.
Waxaan ahay ok xaalada sida ay hadda tahay. Anigu ma isticmaalaan si ay u “kibirsan aawadeed Powered by WordPress” ku qoran boggaga aan, taas oo qalad ah ku yimaado la dulucda aan ku rakibtay (iyo waxaan qabaa mawduucyada caadiga ah aad waxa uu leeyahay, ma dooran-in). Tani ma aha kiiska, maxaa yeelay, waxaan ahay inta yar faano in.
Haddii xeerkan u eegeysa (waxaad ka akhrisan kartaa a comments yar isticmaala halkaan, oo arrintan ku saabsan filaya, in ok la this, Bwin, iwm) Waxaan uga fiirsan doonaan.
Waxa kale oo si adag Waxaan aaminsanahay in ku dhow plugin ah wax in uu halkaas u 4 sano, taas oo aan la halyeygii god ammaanka ah waa talaabo qaldan. Kaliya hal bil ka hor waxaan ahaa offline yara, oo u badan tahay ayaa lahaa awood uma yeelan arrinkaas in muddo ah oo wanaagsan. Aan soo jeedin in aad qaadato waqti aad si ay dib siyaasadda ayaa sheegay in (ogeysiis siin, qaar ka mid waqti go'an oo macquul ah, wax kasta oo). Tani marna ahaa sida arin xasaasi ah, in loo baahan yahay in xoog loo isticmaalo sida.
Si kastaba ha ahaatee, thanks for your rabitaankooda, iyo waqtiga aad, rajaynayaa in aan la kulmi doonaa mustaqbalka ka shuruudo.
green mr sheegay
(Adigaa mudan in aad plugin ku WordPress.org marka aad go'aansato in aad rabto in uu u hoggaansamo xeerka in si gaar ah.)
mahad Otto in ay jiri caddeeyo iyo
Waydiiyaa News in wanaag waxaan jeclahay aad(our) plugin
Waa Transposh noqon nool
Wolfgang indhoqabad sheegay
Hello, Kaliya waxaan rabay in la yidhaahdo Aad ayaad u mahadsantahay ee plugin transposh, waa qalab aad u wanaagsan, Tan waxaan ku soo bixi ka your site, waxaana lay kugu kibreen soo bandhigeen your link.
Ma fahmi kartaa sababta aadan ayaa la soo koobi, sida plugins badan oo xiriir la leeyihiin si ay goobta iyaga ka, wax qalad ah la joogo ma jiro sida ay tahay plugin oo lacag la'aan ah, sidaa darteed waa in aad ugu yaraan ka heli link waxaa ka.
Niels Yacquub sheegay
May 9, 2013 at 10:56 at the
Thanks waayo, shuqulkiinna – Xaqiiqdii waan ku riyaaqaa aad plugin, oo waanan rajaynayaa inaad dib on WordPress noqon doonaa ugu dhaqsaha badan. Intaa ka, sidee ayaan u cusbooneysiin si nooca buuxa? (Waxaan u baahan widgets kale oo badan sida caadiga ah) Miyaan uninstall plugin WP ah, iyo download rakibi plugin ka qaybta aad ku download? Ama in masixi doonaan dhamaan turjumaadaha aan hadda?
Tani ma masixi doonaa turjumaadaha, sida aad u soo jeediyay shaqayn doona. Waxaa jira hab kale inkastoo
1. Hagaaji ka wordpress.org in version 0.9.3
2. Tag meelaha iyo baaritaan “upgrade to nooca buuxa”
3. Mar kale hubi casriyaynta (laga yaabaa in aad ku qasbi this)
4. Hagaaji in nooca buuxa (hadda 0.9.3.1)
Aad baad u mahadsan tahay – Waxaan isticmaali rayigaaga ugu dambeeyey, oo ay soo shaqeeyay weyn!
Waxaan si qalad ah si wax 0.9.3 via bakhaarka wordpress, laakiin hadda calanka maqan. Sidaas uninstalled iyo version soo bax your site. Plugin ma rakibi doonaa, waxa ay yiraahdaan maya plugins sax ah laga helay. Haddana waan ka maqan qalab aad turjumaad goobta ka.
Doonaa this hubi, Si kastaba ha ahaatee, fadlan akhriya comment kale oo ku saabsan sidii ay dayactir ku ka bakhaar.
Hi, Waad ku mahadsan tahay jawaabtaada. Markii aan dib loo hubiyaa ee aad download page Waxaan arkay 0.9.3.1 Link. Waxaan lahaa in ay tirtirto faylasha ka 0.9.3 ka dibna rakibi 0.9.3.1. Waxaa hadda shaqeeya ganaax, la soo celiyay calamada. Aad baad u mahadsan tahay, iyo anigu waan ka xumahay waayo xaaladda leh WordPress.
Our website ku fidaa erayga Ilaah ku wareegsan dunida, waxaana doonayaa inaad ogaato in aad engine turjumaad waa lagama maarmaan si ay dad naftiis la keydsho.
wordpress ma noqon kartaa sentimitir afka kala duwan oo aan Transposh! waxaa jira plugins turjumaad badan Sawirka laakiin dhan oo iyaga ka mid ah waa waxtar 😀 ayaan ugu faraxsanahay isticmaalka Transposh iyo caawinta taageerada afka reer Faaris ahay. 🙂
Hey waydiiyaa, ay ku garanayaa kii 🙂
Just si aad u ogaato in aan arrinta ahaa go'an marka aan reuploaded version ma guurtada ah ee aad saaray server dib ka dibna, ma hubo sida ama sababta, laakiin waxa ay u go'an.
Hadda waxaan u aragto waxa aad loola jeedo aad plugin in laga saaro WordPress, runtii murugo, Runtii waxaan u malaynayaa in labada dhinacba waa u degaan iyo kulmaan hab nus on is fahan this, waayo, mid kasta aawadiis.
Kaliya waxaan si wax version ugu dambeeyay, hadda sidaa u wanaagsan, kormeeri doona ee stats iyo gaadiidka rajeynaya arrinta hore caadadiisu fiirsan.
Waad ku mahadsan tahay haysashada Transposh nool.
May 19, 2013 at 12:04 at the
Happy si aad u maqashid dhibaatada waa jiheysteen, aad ee raba nasiib mustaqbalka 🙂
May 27, 2013 at 9:18 at the
Aad ayaad u mahadsantahay for Transposh fiiladda-in. Xeerka WordPress macquul maaha. Waxaan ahay gebi ahaan on dhinacaaga. Hoose si nooca buuxa iyo kibreen oo ay muujiyaan “turjumay by Transposh” Link.
Your guf-in uu yahay ka ugu habboon in la isticmaalo.
waxaa la plugin uu weli ka shaqeeyo on eray-saxaafadeed website kii horay u plugin ku, Waxaa laga yaabaa in aad ka bixin karta link a download from an repo rasmi ah ee Qaramada Midoobay…?!
Download The on bakhaar oo wordpress halkan horseedaa, waxaad eegi kartaa full version download ku, iyo qaban hagaajinta, haddii kale waxaa laga yaabaa in aad booqo bogga download here.
Update ka duuban http://svc.transposh.org/transposh.latest.zip…
Download guuldareystay. Xarrimay
Wax ku saabsan server waxaa laga yaabaa in this is hortaagaan, fadlan isku day duuban gacanta iyo arko in waxa aad awoodi kartaa in ay helaan faylka
Waxaan oggolahay. Shaqaalaha WordPress, ilaa inta Waxaan ogaanay, runtii waa shaqo aad u xun.
Waxay tirtirto aad forum jawaabin sababta keliya oo ay doonayaan in uu noqdo 'First’ uu jawaabihiisa ama go'aan ku gaadhay in jawaabahaaga ma buuxiso (i siin karaysa 2 Magacyada, laakiin i aan door bidi lahaa) oo doonaya in ay bixiyaan adeegyada ay bixisay shakhsi by xiriirinaya in xirfadle warkooda (haa ..). Tani waa kooxda kaliya ee madow ee WordPress, iyo rajeynayaa waxaa loo beddeli doonaa..
Dave Main sheegay
Ogow waxa aad u jeedo plugins ku saabsan jebiyey kor u qaadida versions pro. Mid ka mid ah erayga si naxariis leh ay u – qoslo.
Your site jecel Will. Haysanayaa track. Translator Fantastic.
Ka dib markii aad turjumaan kale oo dhan ma aha, xataa 2nd ugu wanaagsan.
Qadarka shaqada in aad geliyeen this guf-in xukaamta.
Waxaan samaynayaa shuqul ah ee ururrada daryeelka caafimaadka aan faa'iido-iyo ayaan ma sheegi kartid inta aad ka siib-in ka caawiyay nala tirada dadkeena Hispanic isgaadhsiin.
Just inaad gashaan oo ku dar translations noo gaar ah, waa cajiib.
Bravo saaxiibaday… waxa keliya aad u xun sida WP ayaa sameeyey kugu adkaato inaad si kor loogu qaado naftaada.
Miyaa laygu aad ku talinayaan, hubaal. Ereyga afka mararka qaarkood waa kor u qaadida ugu wanaagsan.
Bogdan Storm sheegay
Fadlan ha kaga tagin field this iyo hayn Transposh nool.
Haddii aad rabto in aynu ka hadli karaa samaynta taraa iyo waan idin caawin doonaa fikrado ku saabsan in.
Uma baahnid inaad WordPress website si kor loogu qaado shaqadaada.
Rajo kor u qaad oo ha noo kaa caawin.
Thanks for shaqo aad u fiican iyo samaynta aad plugin mid ka mid ah ugu wanaagsan ee aan lagu arag tan iyo … Weligaa.
Fadlan.. ha joojin!
Ayaan farxad ku bixinaysaa in ay taageero u on.
Hey, I jacaylkaagu comments on site WP.org halkaas oo aad plugin ka helay mid ka mid star rating. Your xaraaradda waxa aad sameyn muuqataa comments kuwaas. Gunjida it @.
James Janay sheegay
The Mods at wordpress waa run ahaantii dib u Qaday this ee sababaynta. Sida aad u tilmaan… Batoonka share KASTA waa link in goobta kale ee. Plugins facebook ayaa qeexaya sida… SIDEE DHIIRADA aad isku daydo inaad UNITE BAXSAN THE WORLD OF GOOGLE Afcelinta EVERYPAGE!!!
Guys “shaqo cajiib ah!” Waxaan jeclahay aad plugin oo aan jeclahay aad dabeecad u taagan yahay in wixii sax ah!
Wordpress ma noqon doono WordPress oo aan plugins cabsado sida adaa leh. Sida aad ku tidhi Facebook, La Xiriira In, Twitter, Google…dhan ay u hesho in ay sii link dib sababta aadan?
Waxaan ahay 100% gadaashiina ah waxaad udhawdihiin, Waxaan soo bandhigi aad plugin oo aan soo bandhigi aad link! Credit u qalmo in la siiyo halkaas oo credit waa sabab. Waxaad ahaayeen fiican oo ku filan in aynu dad badan isticmaasho plugin iyo aad u qalmaan yara kasta oo u! Waxaa THC aan in dadka at WordPress xiisayn shaqada adag in uu galay wax sidan oo kale. Waxaad u malayn inay dadka oo dhan, ay fahmi lahaa in inta badan. Ka dib dhan, WordPress ka faa'iidaystay shaqadaada, oo dhan isticmaala WordPress ay ka faa'iideysanayaan shaqadaada, sidaas…sababta ma aha in aad? Waxaan kibir xajisan doonaan plugin on my site la link! Oo dadkii oo dhammu ardayda waxaan ku sheegi doonaan in ay sidaas oo kale sameeyaan. Waxaad in badan mudan. Dimuqraadiyadda live Long!!!! 🙂
Dhulku ku raacsanayn aad dhihi dhan, Shinnida! Waxaan jeclahay Transposh habdhaqanka aad …oo waxaan hubaal jecel this plugin cajiib ah taas ayaan kaliya ku rakiban kaliya oo si qurux badan u shaqeeyaa!
Feb, By Transposh, Ma arki karin wax button PayPal deeq meel kasta?? Waxaan qabaa in aad u baahan tahay mid ka mid 🙂 …iyo mahad badan ee this plugin qurux badan!
ama najeb sheegay
Taas macneheedu caddaalad darro. plugin tani waxay ahayd wax fican ila ahay gnna sii isticmaalkiisa si kasta u guys halwax oo u baahan WordPress, iyo u xaq ay tahay in appreiate ur shaqada iyaga iyo u uga dig ka hor inta aysan qaban in, hours aad u xun
Eetaan Sanabria sheegay
Waa hagaag tani nuugayo. Aad ayaan u jeclahay tani fur-in! Waayo, ururka ka raadinaya in ay ballaariso galay Latin America, Transposh noqday qayb aad u muhiim ah qorshaha. Waan ku faraxsanahay bixin lahaa, waxaa ka!
Aad niyad, WordPress!!!